Ukubhikisha e-Algeria kwesekwa yiNhlangano Yezizwe - Bayede News
Ukubhikisha e-Algeria kwesekwa yiNhlangano Yezizwe
INkosazane uNomoya noMhlabuhlangene balile noZulu
Izinkulungwane zabantu base-Algeria ziqondise umbhikisho ezikhulwini zezepolitiki kanye nezombutho ezweni lonke ngesonto lesibili njengoba uphiko lwamalungelo abantu lwenhlangano i-United Nations (UN) luzwakalise ukukhathazeka ngalokhu elikubize ngokucindezelwa kwababhikishi nemibhikisho.
Le mibhikisho yayiphakamise ukuthi kuqedwe nya ukusungulwa kwezombusazwe okudala futhi nezombutho zihlukane nezombusazwe. Le mibhikisho yamiswa ngonyaka odlule ngenxa yokhuvethe.
Amaphoyisa awakaze amise ababhikishi kepha eza ngobuningi bawo futhi isikhulumi se-United Nations High Commissioner for Human Rights sithe kunemininingwane ethembekile eveza ukuthi amakhulu abantu aboshiwe kulo lonke leli lizwe.
Le mibhikisho yaqala ngowezi-2019, okwaphoqa ukuthi ezombutho zikhiphe esikhundleni uMengameli ongumakadebona u-Abdulaziz Bouteflika. Yaqhubeka masonto onke yaze yama ngemuva kokutholakala kokhuvethe kuleli lizwe ngonyaka odlule.
“Zigebengu, seniliqedile leli lizwe,” kumemeza ababhikishi enkabeni ye-Algiers. “Le mibhikisho enokuthula izoqhubeka kuze kufezeke izinhloso zethu,” kusho uMohamed Meriche oneminyaka yobudala engama-33 onguthisha.
UMengameli u-Abdelmadjid Tebboune, owaqokwa okhethwewni lwangowezi-2019 ababhikishi abaningi abalubuka njengombukiso, uncome le mibhikisho njengekhuthaza ukuvuselelwa kukazwelonke kepha ababhikishi babona uHulumeni wakhe uqhubeka nokuphatha njengowaphambilini.
“Sekube nezigamekko eziningi ezweni lonke lapho abezokuphepha besebenzise amandla angekho emthethweni noma ngokweqile kanye nokubopha abantu emizamweni yabo yokucindezela imibhikisho enokuthula,” kusho okhulumela i-UN Rights Commissioner.
Anathi Mtaka Mar 12, 2021